Maxaa lagu xasuusan doonaa Baarlamaanka Puntland ee waqtigiisu sii dhammaanayo (daawo warbixinta 1aad)? – Radio Daljir
Maxaa lagu xasuusan doonaa Baarlamaanka Puntland ee waqtigiisu sii dhammaanayo (daawo warbixinta 1aad)?
Seteembar 24, 2018 5:53 g 0
Muxuu waxtar ama liidasho reebay Baarlamaanka Puntland ee xasaanaddu ka dhammaanayso (warbixinta 1aad)?
Puntland haatan waxa ay lugaha la sii gelaysaa xilli doorasho madaxtooyo iyo mid baarlamaan, kaddib markii uu heer gabagabo ah gaaray cimriga xil-hayneed ee hay’adaha dawliga ah ee hadda jira.
Baarlamaanka ayaa ugu horreeya golayaasha dawladeed ee xafiiska bannaynaya, waxaana sida qorshaysan baddelaya Baarlamaan cusub oo ka kooban inta uu ka kooban yahay midkaan hadda sii dhacaya, kaas oo ah 66 xubnood.
Haddaba maxaa lagu xasuusan doonaa Baarlamaankaan Puntland ee sii dhacaya waxtar iyo liidashaba?
Warbixintan 1aad oo kow ka ah warbixinno xiriir ah oo Radio Daljir ka diyaarshay Baarlamaankaan tagaya xasuusta u taalla iyo tayada la rabo in uu yeesho midka soo aadan, waxaa inoo soo jeedinaya Cabdifataax Cumar Geeddi.
ARDAA 112 Siyaasadda & Dhaqaalaha 476 Wararka 19780